Playlists Youtube ao amin'ny VLC. | Avy amin'ny Linux
Playlists Youtube ao amin'ny VLC.
Fijerena sy fizahana hitako fa ity endri-javatra ilain'ny mpilalao ity VLC ary izany ve izao VLC Azonao atao ny milalao ny "playlists" na ny playlists misy ao Youtube.
Raha tsy misy resaka be dia be, andao hiasa. Voalohany dia mila manana VLC napetraka (dooh) isika
Izahay dia misintona ny plugin VLC izay manao majika
Misintona Plugin ho an'ny VLC
Mamorona ny lahatahiry izahay / usr / share / vlc / lua / playlist /
Vantany vao misintona ny rakitra LUA isika dia tsy maintsy mamindra na mandika azy amin'ny lalana: / usr / share / vlc / lua / playlist / raha tianay ny hiasan'ny plugin ho an'ny mpampiasa rehetra, na raha ho an'ny mpampiasa iray ihany no tianao. $ HOME / .local / share / vlc / lua / playlist /
Rehefa avy naka tahaka ilay rakitra dia sokafy fotsiny ilay mpilalao dia mankanesa any Medium → Manokatra fanarian-tserasera (Ctrl + N mitambatra key) ary ampidiro eo amin'ilay saha mifanentana amin'ny adiresy ny lisitry ny playlist tianay hilalao. Ny tsara indrindra dia izany afaka mamonjy ilay lisitra ho lisitra playlist VLC isika, ity mba tsy hila handika / hametaka ny adiresy mitovy hatrany hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Playlists Youtube ao amin'ny VLC.
Fandraisana anjara tsara.
Izy io no mpilalao ady ao amin'ny GNU / Linux, milalao flac izy io, ny kinova farany dia novolavolaina mba hilalao rakitra miaraka amin'ny fanitarana mkv, heveriko fa manitsy ny "lag" anelanelan'ny sarimihetsika sy ny audio, ankoatry ny efa malaza ampiasaina amin'ny fametahana dikanteny amin'ny sarimihetsika sy andian-dahatsoratra, ity sy SMplayer duo tonga lafatra ho an'ny feo sy horonan-tsary. arahabaina
Indraindray hadinoko ny herin'ny VLC.
Ny andro lasa teo dia nisy iray tao amin'ny reddit nitady fampisehoana izay hitendry mozika sy podcast video ao anaty playlist ary tsy nisy nanolo-kevitra an'i VLC ho azy na dia vitany tsara aza izany.
Loharano: http://ubunlog.com/vlc-reproduciendo-listas-de-reproduccion-de-youtube/? Moa ve ianao efa naka tahaka ny fakana namboarina: /
Ny marina dia manome ady ahy ny mpilalao horonantsary rehetra saingy io ihany no mampitomany ahy, ny ratsy indrindra, tsy mandeha ny feo, pixelated ny horonan-tsary ary horonan-tsary misy famaritana avo lenta (HD) izy ireo, niezaka tamin'ny totem aho ary mandeha ny feo, mpilalao smplayer sy gnome sns, izy rehetra dia slop hilalao horonan-tsary amin'ny HD, nanandrana tamin'ny distro maro aho ary ny mpilalao tsy miova dia manome olana mitovy amin'izany
Tsy olana amin'ireo mpilalao izany, fa olana amin'ireo mpamily horonantsary.
edprogressive dia hoy izy:
Mamaly amin'ny edprogressive
Azonao atao koa ny manao azy amin'ny Smplayer na Umplayer (backend izay aleoko VLC).
Ary koa banshee, milalao horonantsary, tokony andramo ity mpilalao ity. arahabaina
Saingy… fa… Banshee dia bloatware Mono / .NET!
Ny hany zavatra ratsy amin'ny Banshee dia ny fampiasana Gtk fa tsy .Net
Ratsy ve ny fampiasana .NET? O_O Marina? ¬¬
Matotra, mono dia fenitra mivelatra.
Mono dia sehatry ny rindrambaiko natao hamela ireo mpamorona hamorona rindranasa cross platform mora foana. Tohanan'i Xamarin, Mono dia loharanom-pahalalana misokatra ho an'ny Microsoft .NET Framework mifototra amin'ny fenitra ECMA ho an'ny C # sy ny Common Language Runtime. Fianakaviana iray mitombo vahaolana sy vondrom-piarahamonina mandray anjara mavitrika sy mavitrika dia manampy amin'ny fametrahana an'i Mono ho lasa lohalaharana amin'ny fampandrosoana ny rindranasa Linux.
Efa misy fenitra misokatra manandrana maka tahaka ny haitao izay, matotra, inona no tsara amin'izany?
Ny fahafaha-manao, ny fahatsoran'ny fiteny, ny multiplatform ary manome fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny fatorana samihafa.
Nozaraiko izay lazain'i @avav. Tsy Gtk no olana (halefany any amin'ny Gtk3 ihany izy ireo), Mono ny olana ary miorim-paka sy mazava tsara aminao ity:
Mono no tongotra tian'i Microsoft apetraka ao amin'ny tontolon'ny GNU / Linux hanohizany ny sehatry ny fandraharahany izay .NET dia lasa (karazana teknolojia somary hafahafa toa toa mandeha tsara) ary misy lafiny roa: a) ny fampiharana ny vahaolana mifototra amin'ity teknolojia ity amin'ny orinasa, izay mahatonga azy ireo hiankina amin'izany, amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny drafitra fandoavam-bola be, b) ny orinasa lehibe izay Microsoft dia MSDN.
Araka ny nomarihan'ny namana elav dia efa misy ny haitao F / LOSS izay manao zavatra mitovy ihany saingy mazava ho azy fa MAIMAIMPOANA (na farafaharatsiny misokatra), «kaominista» (eto dia aparitako i Steve Ballmer sy ireo loholona amerikana maromaro taona vitsivitsy lasa izay izay nanasokajy azy ireo ho toy izany) ary azon'ny olon-drehetra atao maimaim-poana.
Ah! Ary azo antoka sy milamina kokoa koa izy ireo satria voamarina tsy tapaka!
Raha ny reko momba izany .NET dia toa manapa-kevitra tsikelikely io hodgepodge teknolojia io amin'ny sehatra tena izy, izay tsara. Ny zavatra ratsy dia ny fitantanana azy araka ny tombotsoan'ny orinasa iray izay fantatsika fa ratsy sy mamitaka ary misongadina indrindra amin'ny fanafoanana ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny fanodinana ireo orinasa sy ny fanaovana azy ireo hanjavona fa tsy hamoronana vokatra miavaka sy mametraka fironana.
Ary koa ... maninona ianao no mampiasa bloatware toa an'i Mono, izay misy ny fametrahana rafitra mavesatra, amin'ny fomba Java tsara indrindra, rehefa manana haitao mahatalanjona mamela anao hanao mitovy tanteraka amin'ny fomba mahomby kokoa ianao nefa tsy very mifehy ny kaody sy ny fitaovana ampiasainao?
Tena mila zavatra toa an'i Mono ve ianao? Tsia ny marina tsia. Averiko ihany: teraka i Mono taorian'ny fifanarahana teo anelanelan'ny Microsoft sy Novell ho tobin'ny M $ hiditra amin'ny faritanin'ny GNU / Linux.
Mora izany, raha tena tsy nampidi-doza i Mono nilaza fa Debian izy ireo dia hanome azy fanampiana ofisialy (fa tsy hampiseho ny nifiny amin'ireo devionan'ny distro izay mametaka azy), dia tsy ho nesorin'i Ubuntu tamin'ny fizarana azy ireo ary ankehitriny dia be mpampiasa io.
Raha na ny applet Fuduntu Jupiter (ampitaina amin'ny Ubuntu koa) dia nosoratana indray avy any Mono ka hatramin'ny Python ...
Mono sux, tsy noho ny zavatra kendreny fa noho ny famadihana asehony. Amin'ny F / LOSS dia tsy mila Mono na .NET isika ary mazava ho azy fa ny M $ dia tsy mikasa ny hampiasa teknolojia maimaimpoana - ampahibemaso - noho izany dia teboka tsy azo ihodivirana izany ary ny fahalotoana misy manoloana izany dia tena takatra.
Heveriko fa tokony hojerenao raha misy fifanolanana amin'ny pulseaudio sy alsa ianao, io no matetika matetika, ao amin'ny fitaovana VLC, jereo raha manana "foza" alsa sy pulseaudio ianao ary inona no entin'i Ubuntu amin'ity tranga ity. arahabaina
Fantatro, saingy fohy dia fohy ny lisitra. Heveriko fa amin'ny "fametrahana tanana" amin'ny VLC araka ny ilazako azy dia mieritreritra aho fa afaka mandroso. arahabaina
Tsy te ho latsaka anaty lesoka aho rehefa mandefa lahatsoratra (tondra-drano), heveriko fa izany no nanoratana azy, mpampiasa tsotra aho. arahabaina
Fandraisana anjara lehibe, afaka mandeha miaraka amin'ny mozikanao na aiza na aiza ary mampandeha azy mora sy tsotra ... na tsy misintona
Nanandrana aho fa tsy nety, tsy haiko na nanao ratsy aho.
Rehefa te-misintona ilay fisie aho fa tsy manome ahy safidy hitahiry dia manokatra takelaka iray izay anehoany ahy ny kaody. Ny nataoko dia ny mandika ary apetaho ao anaty rakitra izay nomeko anarana hoe playlist.lua
Taorian'io fisie io dia nalaiko tany amin'ny filazan'ny lahatsoratra.
Mampiasa Linux Mint 13 Kde aho ary nanandrana nisintona tamin'ny Mozilla na Chrome ary nanao toy izany koa
Heveriko fa manana fahalalahana isika hisafidy izay tsy andoavam-bola na tsia, ahoana raha i blitzkrieg irery no mpilalao mahomby amin'ny rafitrao; Fa satria avy any Ruindos fotsiny ianao dia tsy ho afaka hitsapa azy io intsony? Tsy hoe nilaza fotsiny aho fa misy io safidy io, niresaka ihany koa aho fa afaka mihodina amin'ny fitaovana izy ary manamboatra azy io avy eo, ary raha mahita fa mitondra ubuntu ho an'ny pulseaudio na "foul", dia efa nanandrana aho fa miasa any Fedora, Opensuse sy Debian. arahabaina
Ahoana ny fomba handaminana ny Jdownloader amin'ny fifandraisana indray mandeha ho azy